Ebumnuche iji gaa Andalusia ma nọrọ ndụ | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Almería, Spain obodo, Córdoba, Granada, Huelva, Malaga, Sevilla
Onye ọ bụla, ndị ọzọ na ndị na-erughị, anyị nwere ebe anyị na-achọ ịgbaba site n'oge ruo n'oge. Anyị na-akpọ ebe ndị a "ebe nsọ" anyị, ebe anyị na-ana batrị anyị mgbe anyị nwere ọkara ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu. Ha dị ka nkuku ume ndị ahụ na-enyefe anyị udo, nke anyị na-achọ ịlaghachi mgbe niile na nke ọ bụrụ na anyị nwere ike, anyị ga-anọnyere ma bie ndụ n’enweghị oge.
Enwere m otu n'ime ebe ndị ahụ, ma ọ dabara nke ọma maka m, ọ dabara ma ebe amụrụ m na ebe obibi m: Andalusia. O nwere ike ịbụ isiokwu dịpụrụ adịpụ n'ihi eziokwu a, mana ihe ole na ole abụghị… Ma ọ bụrụ na ị kwenyeghi ihe kpatara eji agagharị na Andalusia ma nọrọ ebe ahụ, gịnị ka m ga-agwa gị, bịa leta hụ onwe gị.
Otu na otu, ihe kpatara m
Andalusia nwere otu n’ime ala ndị Spen dị n’ebe ha nọ ọtụtụ osimiri kacha mma na Spen: Oké Osimiri Atlantic na Oké Osimiri Mediterenian na-asa ájá ya, nke ọma na nke ọcha na ọdịda anyanwụ na ụrọ nwere ụrọ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Yabụ, ọ dị mfe ijegharị na Huelva, Malaga, Cádiz (naanị ịkọwa atọ) yana nnukwu ísì nke oké osimiri na-erute anyị ... Maka anyị ndị amụrụ na ebili mmiri, ịnwe oke osimiri dị ka «Nzọpụta».
Maka ọ theụ nke ndị ya. N'ihi na anyị bụ ndị nwere agwa na-emeghe, obi ụtọ ma na-ekwurịta okwu. N'ihi na ọ bụrụ na ị fuo n'okporo ụzọ dị warara ma ọ bụ na ị maghị ebe ebe ị ga-aga, anyị agaghị enwe oge iji duzie gị ma nyere gị aka ...
Maka nke ya ihu igwe magburu onwe yaAgbanyeghi, ikwu eziokwu, n’etiti Ọgọstụ ị ga-enwe oge adịghị mma: oke ọkụ n’abalị abụọ ma ọ bụ anọ n’ehihie. Mana echegbula onwe gị, abalị na-adịkarị jụụ, ọkachasị n'akụkụ ndị dị n'ụsọ osimiri, ebe ikuku ikuku na-adịkarị na-eme ka ikuku dị jụụ ma na-eme ka ọ dị mma.
N'ihi ọdịbendị bara ụba anyị nwere. N'ihi na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ gafere ebe a (ndị Finishia, ndị Rom, ndị Arab, ...) na-ahapụ akụkọ ihe mere eme ha kwa afọ ma ị gaghị enwe ebe ọbụlagodi ọkara afọ ịga njem site na njedebe ruo na njedebe nke Andalusia niile. ebube ya ama ihe ncheta na ulo (ụlọ alakụba nke Córdoba, La Giralda na Seville, La Alhambra na Granada, wdg, wdg).
N'ihi na anyị nwere na-abụghị nke oké osimiri: anyị nwere ugwu na snow na ọmarịcha obodo Granada. Ọ bụrụ na ị na-amasị egwuregwu ski na egwuregwu egwuregwu n'ozuzu, ebe a na Andalusia ị gaghị anapụ onwe gị nke ya. Have nwere ebe ezumike Granada, nke afọ na-ejupụta na ndị bi na ya na ndị njem nleta.
N'ihi na anyị nwere ibi ndudị ka ya Doñana Natural Park, ebe anyi puru ihu umu ndi echedoro dika lynx na otutu ndi ozo di ka flamingos na otutu nnunu, ele, rabbits, agwọ, wdg.
Ego nke obodo mara mma na anyị nwere ọtụtụ ihe na mpaghara nke oke osimiri dị ka na ala ugwu. Agaghị enwe ohere n’isiokwu a ịkpọ ha niile, yabụ anyị na-akpọ gị oku ka ị gaa na Andalusia ma chọpụta n’onwe gị.
Maka nke ya gastronomy: Obodo ọ bụla nke Andalusia nwere ụdị nri ndị dị ebe ahụ, nke kachasị baa ọgaranya ma sie ike! Nweghị ike ịga na Andalusia wee pụọ n’agbalịghị ham, mkpụrụ osisi strawberry ya, mmanụ oliv ya, anchovies ya, coquinas, prawn ya, mmanya ya ... Anyị nwere ọtụtụ Michelin kpakpando n'etiti anyị. You chọrọ ịma aha ụfọdụ? Kisko Garcia, Abantal, La Costa, Skina, tinyere ndị ọzọ.
N'ihi na inwe anyi nweru ekpu ọdo, n'obodo Almería, nke jere ozi dị ka ebe maka ọtụtụ ihe nkiri site na fim na usoro, dị ka ama ama "Egwuregwu nke n'ocheeze" iji kpọọ nanị otu na nke ugbu a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile maara.
Maka ọwụwa anyanwụ ya, site ìhè na Huelva Kpọmkwem, ọ na-anọ ntakịrị oge na mbara igwe pink ya mgbe ọ malitere ọdịda anyanwụ bụ ezigbo obi ụtọ maka anya. Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ obodo m, kama ọ nwere anyanwụ mara mma kachasị mma Ahụla m ná ndụ m (ruo ugbu a).
Maka ha ememe na oriri. Maka na dika ndi ozo, anyi amataghi otu anyi si ekpori ndụ ma anyi enwe oge ezumike. Ọtụtụ n'ime ahịa anyị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ, dị n'etiti oge opupu ihe ubi na ọkọchị, n'ihi ihu igwe dị mma. Gaba ha na-enwe fun dị ka onye ọzọ Andalusian.
Maka flamenco mụrụ ebe a, n’ihi na nke a bụ ụlọ ndina ya. Dị ka anyị niile mara, ọ bụ ụdị egwu agafeela ókèala, na-erute Japan. Ọ bụrụ na ịchọrọ flamenco ma chọọ ịnụ ụtọ ya, anyị na-akwado agbata nke Granada ma ọ bụ Jerez de la Frontera, na Cádiz… N'ebe ahụ ị nwere ike iku ume nka.
Anyị ekwesiri ị nye gị ọtụtụ ihe mere ị ga-eji gaa Andalusia? Ha ezuru ma ha niile abụghị! Na-anwa anwa jiri anya gị chọpụta ndị na-efu efu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ebumnuche iji gaa Andalusia ma nọrọ ndụ
Rogha puerite dijo
Ọ bụrụ na ọ bụ ịga leta ma ọ bụ nọrọ oge ọkọchị ma eleghị anya .Ma agara m ibi ndụ ma ị nwụọ na-asọ oyi.Enweghị ọrụ dị mkpa na ọrụ, ọ dịghị ihe dị njọ na ihe ọ bụla, enwere nnukwu karama na zorron ọzọ. Mpaghara kachasị njọ na Europe na PISA na-akọ akụkọ na mpaghara nke ndị ohi zuru oke.
Zaghachi na Curro puerite
N'ezie, ọ mara ezigbo mma, mana ndị mmadụ na-eme ọyị enyi ma ọ bụrụ na ị gaa njem nleta. Mgbe ahụ, ha bụ ndị kachasị njọ m hụtụrụla. Mkparị, ndị ohi, ndị na-akparị mmadụ, ndị umengwụ. Anaghị m akwado ibi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị mma nke ndụ na obi iru ala.
Etu Andalusian edemede dara ma ọ bụ nkịtị, ọ nweghị ike ịkwụsị nke ukwuu. Banyere ọdịda anyanwụ, Cádiz na-amasị m (ugwu ya na obodo ọcha na-efu).
Banyere kwuru. Ikwu na ndị Andalusi bụ ndị ohi na ndị umengwụ, ọ dị m ka m na-ekwu ọtụtụ okwu. Arụ m ọrụ site na ndị sitere na mpaghara ndị ọzọ, abịarutela m ndị ohi karịa ebe a, mana site n'ebe ahụ ha niile bụ…. iche na otutu nde di ka ndi nke anyi mara n’obodo ma o bu n’obodo bu ime ka ha lee ya anya.
All Andalusia mara mma ebe m si ebe ahụ, ọ dị m ka enweghị nnukwu nkwanye ùgwù na ọdịbendị ịsị ihe ndị a gbasara Andalusia, lee ị na-eme karama oriri oriri wdg n'ihi na ọ bụghị iwu na ị ga-ewe iwe mgbe niile na obere dị ezigbo mma ịkwụpụ ma rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu mana ọ fọrọ obere ka mba niile bụrụ otu ma ọ bụ njọ
Ndị Andalusia dị iche na ọgwụgwọ ha, obi ụtọ na nkwukọrịta. A mụrụ m na Madrid, enwekwara m obi ụtọ iso ụmụ m nọrọ obere oge na Malaga. Obodo nnabata ahụ nyere m udo na ihe niile mere ka anyị nwee ọ happyụ mgbe ahụ….
A na m atụ uche na-acha anụnụ anụnụ nke elu-igwe ya na ịza mmiri ya…. Agaghị enwe ebe ka mma maka m .ọ bụrụ na m ga-emechi anya m ......
Anọ m na Seville maka ọnwa 8, ọ dịkwa ebube. Gaazie gburugburu obodo, nke mara mma. Ndị ohi na nke ahụ, amaghị m, enweghị m nsogbu ndị ahụ, n'eziokwu echere m na ha na-atụ m egwu, ọ ga-abụ n'ihi ịdị elu m .. Ugbu a amaara m na achọrọ m ibi ebe ahụ ọzọ, mana olee otu ? Amaghị m ma ọ bara uru ịchọ ọrụ, ọ bụrụ na enweghị ụdị okwu Spanish maka m? N'ebe a, anọghị m ya, enweghị m ike ịbanye, ọ dịkwa m ka m nọ n'otu ebe na afọ na-aga. Ọ dị m ka ya bụrụ na a mụrụ m na Andalusia. Naanị ọnọdụ ya, ọdịdị ala ya, enwere ike dị oke mkpa. Banyere ihu igwe, ọ masịrị m ọnwa 3 iji tachie okpomọkụ karịa ọnwa 10 oyi, na n'ọtụtụ oge mmiri ozuzo na igwe ojii nke na-anaghị akwụsị. Echere m na ọ ga-akpali m n'oge na-adịghị anya n'ala m bu n'obi m - Andalusia m.
Ebe 7 dị iche iche maka May Bridge